यी हुन् सेक्सी महिला चिन्ने तरीका onlinedarpan.com
Wednesday 27th of October 2021 / 11:12:00 AM
यी हुन् सेक्सी महिला चिन्ने तरीका
अनलाइन दर्पण 2017-03-03
कस्ता नाक हुने महिला कस्ता स्वभाबका हुन्छन् ?
१) यदि कुनै महिलाको नाक बीचबाट फैलिएको छ वा अगाडिको भाग अधिक उच्च छ वा अधिक मोटो छ भने यस्ता महिला प्रेम, सहानुभूतिबाट बञ्चित हुन्छन् । यस्ता महिला दुष्ट प्रवृत्ति, चरित्रहीन वा निर्णय लिनमा हतार गर्ने प्रकारका हुन्छन् ।
२) सामान्य लम्बाई तथा सिधा नाक भएका महिलाहरु सुन्दर, बुद्धिमान, मेहनती तथा मिजासिला प्रकारका हुन्छन् ।
३) छोटो नाक भएका महिलाहरु चलाख, चतुर, शरारती वा कामातुर हुन्छन् ।
४) यदि एउटी महिलाको नाक सुगाको जस्तो झुकेको छ भने उनी राम्रो स्वभाव, सम्पत्ति मन पराउने, चतुर तथा परिवारको हित चिताउने हुन्छन्।
५) नाकमा रौं भएका महिलाको स्थिति चतुर र अशुभ हुने गर्दछ।
६) यदि नाकको टुप्पाे छोटो छ भने यस्ता महिला दासले झै जीवन बिताउने प्रकारका हुन्छन् । नाकको टुप्पाे लामो हुनु उनीहरुको कठोर स्वभावको प्रतिक हो । यदि टुप्पाे फैलिएकोछ भने श्रीमानको दीर्घायु हुनुको प्रतिक हो।
७) यदि नाक बढी नै चौडा र मोटो छ भने यस्ता महिलाहरु आलसी, बलियो नेतृत्व, घमण्डी हुन्छन् ।
कस्ता आँखा हुने महिला कस्ता स्वभावका हुन्छन र ?
१)छोटो, सुस्त, उदास स्लेटी रङ्ग, गोलो र परेवाकोजस्तो आँखा भएका महिलाले कुरुपता प्रदर्शन गर्दछन् । यस्ता महिला चतुर हुन्छन् साथै उनीहरु जीवनमा अघि बढ्न चाहँदैनन् ।
२) रातो आँखा भएका महिलाहरु धोकेवाज र बेइमान हुन्छन् ।
३) यदि आँखा निकै लामो तथा हल्का लालिमायुक्त छ भने यस्ता महिला आवेशपूर्ण हुन्छन । यस्ता आँखा भएका महिला समाजमा निकै लोकप्रीय हुन्छन् ।
४) गोलो वा कालो आँखा भएका महिलाहरु निकै सेक्सी हुन्छन् ।
५) सधैं निंदमा झै रहेने मदमस्त आँखा भएका महिला विपरीत लिङ्गीप्रति निकै आकर्षित हुन्छन् र चाँडै चरित्र त्याग गर्दछन् ।
६) नरम किनारा वा कालो पलवाला आँखा भएका महिला भाग्यशाली हुन्छन् ।
७) यदि आँखाको किनारमा हल्का रौं छ, आँखामा पँहेलोपन छ भने त्यस्ता महिला बढी विरामी हुन्छन् ।